UkuSebenza okuThengisayo okuShishina ngokuSebenza kwabaThengi | Martech Zone
UkuSebenza okuThengisayo okuShishinayo okuSebenzayo kuBathengi
NgoLwesithathu, Septemba 2, 2015 Douglas Karr
Iipesenti ezingama-70 zabathengi ezikhethiweyo fumana ulwazi malunga nenkampani kumxholo endaweni yentengiso. Iipesenti ezingama-77 zamashishini amancinci atyala imali kwiindlela zokuthengisa umxholo ukuguqula iindwendwe ezikwi-Intanethi zibe ngabathengi. Eyona nto iphambili yile:
Ukucofa kwiMixholo ekwabelwana ngayo kunamathuba amahlanu okuba nesiphumo sokuthenga!
Ngaphandle kwenkcitho yexesha, ukuthengisa umxholo akuyondlela ebizayo yokukhuthaza ishishini lakho. Ubuninzi bamashishini amancinci anenkqubo yolawulo lomxholo olomeleleyo kwaye aqhubayo, ebenza ukuba bavelise kwaye babelane ngomxholo kwi-intanethi. Kodwa ngaba benza yonke into abanokuba yiyo?
Zeziphi iindlela zokuThengisa eziSebenzayo eziSebenzela amashishini amancinci
email Marketing -80% yamashishini amancinci aguqula iindwendwe ezikwi-Intanethi zisebenzisa abathengi zisebenzisa iileta-ndaba.
amanqaku -I-78% yamashishini amancinci aguqula iindwendwe ezikwi-Intanethi ziye kubathengi ngokupapasha amanqaku kwi-intanethi.
Ukwabelana ngemifanekiso -Iipesenti ezingama-75 zamashishini amancinci aguqula iindwendwe ezikwi-Intanethi ziye kubathengi ngokwabelana ngeefoto kunye nemifanekiso kwi-intanethi.
Videos -Iipesenti ezingama-74 zamashishini amancinci aguqula iindwendwe ezikwi-Intanethi ziye kubathengi ngokupapasha iividiyo kwi-intanethi.
Ezi zibalo ziphezulu zi-4 zezona sizathu sokuba siphuhlise i-CircuPress njenge Iplagi yeendaba yeWordPress. Siqaphele ukuba amashishini amancinci amaninzi ayesebenza kwimixholo yawo, kodwa engenayo inkqubo ye-imeyile endaweni enokuthi ihambise ngokuzenzekelayo umxholo kubabhalisi ngaphandle kokuchitha ixesha okanye itekhnoloji yokudibanisa umceli mngeni kunye nokubhala.
Le infographic yaveliswa ngu UKUBHALA. Unyaka nonyaka, i-SCORE ibonelela ngoqeqesho kumashishini amancinci, iindibano zocweyo kunye nemfundo ngaphezulu kwama-375,000 amashishini amancinci nasakhulayo. Ngaphezulu kwe-11,000 yeengcali zeshishini zokuzithandela njengabacebisi kwizahluko ezingaphezu kwama-320 ezinceda uluntu lwasekhaya ngemfundo yoshishini.
tags: 2015b2cizinto ezilungileyoisetyhulaUkuThengiswa kweMpahlaemail MarketingInqakuShishini
Amava eselfowuni kunye nefuthe lawo kwiiNtsingiselo
IBigCommerce iphehlelela iqonga leShishini le-Ecommerce